गर्दै नगरेको गल्तिको सजाय बोक्न बाध्य हुनुपर्ने यो कस्तो संस्कार हो हाम्रो ? « प्रशासन
गर्दै नगरेको गल्तिको सजाय बोक्न बाध्य हुनुपर्ने यो कस्तो संस्कार हो हाम्रो ?
जीबनमा पहिलो पल्ट तराइमा खेलिने रमाइलो होलीको अनुभुत गरि नसक्दै मलाई तय गर्नु थियो, नेपालगंज देखि सल्यान सम्मको यात्रा ।
चैत्र ११ गते बिहानै नेपालगंज बसपार्क पुग्दा मौसम हल्का चिसो र मन एक प्रकारको बेचैन भएको अनुभति भएको थियो मलाई ।
घरमा छोडेर हिडेको काखे बच्चाको अनुहारमा लपक्क टाँसीएको थियो हृदयमा, भित्रको मातृत्व उम्लेर अमिलो भएको थियो यात्राको शुरुवात ।
टिकट लिएर म बसमा बसे । निकै बेर पछि खचाखच यात्रु भरिएको बसले नेपालगंज छोड्यो ।
बस भित्र अनेकौ यात्रुहरु छन् अथवा भनौ अनेक जिवनहरु छन् । आ–आफ्नै कथा ब्यथा । आ–आफ्नै लय छन् जिन्दगीका ।
धेरै कलिला बच्चाहरु छन् । बच्चालाई आमाको काख संसारको सबभन्दा प्रिय लाग्छ, त्यसैले त त्यो यात्राको कुनै प्रतिक्रिया थिएन, ति कलिला जीवनहरुको अनुहारमा, झोलुङ्गो बनाएर आमाको काखलाई आ–आफ्नै धुनमा मस्त थिए, ति अबोध नानीहरु ।
मेरो छेउमा एउटा बच्चा आमासँग लपक्क टासिएर मलाई टुलुटुलु हेरिरहेको थियो । उ खुट्टा घरि घरि म तिर ल्याउथ्यो, उसकी आमा त्यसो नगर अन्टिको नाना फोहोर हुन्छ भन्दै सर्तक गराउथिन्, उ मुसक्क हाँस्दै फेरी त्यसै गथ्र्यो, आखिर संसारका अनेक अनेक भयहरु सँग अनभिज्ञ थियो, उ स्वतन्त्र थियो आफ्नो हृदयको गित निस्फीक्रि सुनाउन, त्यसैले त यसो गथ्र्यो ।
केहीबेर पछि म आफैले उसको खुट्टा मेरो काखमा राखीदिए अब उसलाई सजिलो भएको थियो । पलङ्ग बनाएर हामी दुइको काखलाई उ एकै क्षणमा मस्त निदायो । मेरो यस्तो क्रियाकलाप देखेर ति बैनीले जिज्ञासु पाराले भनिन् दिदि हजुरको पनि बच्चा छ हो ? अ छ यहि बाबु जत्रै । मैले मधुरो स्वरमा भने ।
यसो भनिरहदा मन भित्र एक तमासको सुन्यता छायो नचाहेरै पनि आँखा रसायो । त्यो सानो बच्चाको काख खोसेर म यो कुन चाहि नयाँँ खुसीको यात्रामा छु, आत्मग्लानी भयो भित्रभित्रै । कति कमजोर हुन्छ मन यो बिषयमा । बिभिन्न प्रकारका तालिममा सहभागीहरुलाई हिम्मत जुटाउन र जीवनमा प्रगति गर्न तालिम दिदै हिड्ने एक प्रशिक्षक, आफ्नै जिवनको पाठशालामा कति कमजोर ।
बस आफ्नै गतिमा हुइकिरहेको थियो, ति बैनी र मेरो अपरिचयको दुरीलाई अलिक छोट्टाइदिएको थियो त्यो सानो बाबुले । सायद यसैलाई आधार बनाउदै उनले सोधीन दिदि काहासम्म हिड्नु भएको नि, काम गर्नुहुन्छ ?
होला है उनले प्रश्न र जिज्ञासा एकै पटक राखीन् । हो, म अफिसको कामको शिलशिलामा सल्यान जान लागेको । मैले उनको दुबै प्रश्नको जबाफ एकैचोटी दिए । केटी मान्छेले पनि यसरी जागीर खानु कति राम्रो हुन्छ है, मैले पनि तपाइले जस्तै पढेको भए आज मेरो यस्तो हालत हुदैनथ्यो होला नि है । उनीभित्र भएको पिडाको समुद्र एकैचोटी बिस्फोट होला जस्तो भयो, उनि आफूलाई संम्हाल्न निकै प्रयास गरिरहेकी थिइन् होइन के भयो र ? बैनी उनको त्यो छटपटाहाटलाई चिर्दे मैले सोधे ।
मेरो पनि सुन्दर सानो घर थियो, श्रीमानको इन्डीयन आर्मीमा जागिर थियो, एउटा छोरो थियो सम्पति पनि बिस्तारै जोड्दै गएका थियौ, चारकोठाको एउटा घर थियो कोहलपूरमा एक टुक्रा जग्गा थियो, दिदिबैनीहरु मेरो भाग्य देखेर डाहा गर्थे । आफ्नो सफलता का सुन्दर कथाहरु एकैचोटी सुनाइन् ।
यी शब्दहरु सँगै उनको अनुहारमा बलेको थियो सानो उज्यालो । लगत्तै सुनाइन जिवनको अर्को दुखद पाटो । मात्र ६ महिनामा मेरो जीवन काहाबाट काहा पुग्यो दिदि, यति भनिसक्दा एकैक्षण अगाडि उनको अनुहारमा देखिएको उज्यालो उनको आँखामा बगेका ब्यथाहरुको सप्तकोशीले बगाइसकेको थियो ।
के भयो र भनन ? मैले निकै जिज्ञासु पाराले भने । पछिल्लो पल्ट पल्टनमा आउदा उसले पहिला पहिला जस्तो पैसा ल्याएन, अनि छोरालाई र मलाई पनि केही ल्याएन । कुनै समस्या प¥यो होला मैले यसलाई स्वभाविक ठाने, केही भनिन, एक दिन नेपालगंजको प्रहरी कार्यालयबाट फोन आयो, तपाइको श्रीमान हिरासतमा छ, म डराउदै महानगरिय प्रहरी कार्यालयमा पुगे ।
उसलाई ड्रग्स प्रयोग गर्दागर्दै समातिएको रहेछ, ड्रग्स प्रयोग गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय हुन्छ भन्ने त्यहाँ पुगेर थाहा पाए, अनेक अनेक उपायले त्यतिबेला उसलाई छुटाइयो, तर उसको लागेको बानी हटेन उसले जग्गा बेच्यो, घर बेच्यो, मेरो तिलहरी बेच्यो, ग्याँस बेच्यो, घरका भाडा कुडा बेच्यो, बेच्न मिल्ने जति सबै बेच्यो मात्र उसको भागको म र छोरा बाँकी छौ अरु सबथोक बेच्यो ।
ड्रग्स खान पाएन भने जुत्ता टोक्थ्यो, माटो खान्थ्यो अनि चक्कुले चिरेर आफ्नै हात छिया छिया पाथ्र्यो । उ निकै कमजोर भयो, मानसिक सन्तुलन गुमेजस्तो भयो, मलाई देख्दा कहिले डराएर लुक्थ्यो, कहिले टोक्न आउथ्यो, कहिले चिर्थोथ्यो, यति भनिसक्दा उनको अनुहारमा पीडाको साउन बर्सन ठिक्क परेको थियो, उनि अझै अगाडी बढ्दै गइन्, उपचार गर्न र यो कुलतबाट छुटाउन काठमाण्डौ लगे, तर त्याहाँ पनि ड्रग्स प्रयोग गर्दा गर्दै काठमाण्डौको पुलिसले समातेर लग्यो अहिले उ हिरासतमा छ, अब के गर्ने ? यहि सल्लाह गर्न माइती सल्यानमा जान लागेको । यति भनेर उनले आफ्नो जिवनको दुखद कथाको बिट मारिन् ।
तर मेरो मथिङ्गल भने अनेक अनेक प्रश्नहरुले खलबलिन शुरु भयो, मैले फेरी कोट्याएर सोधे तिमि कति बर्षकी भयौ ? उनले भनिन् यहि माघमा १७ पुगेर १८ लागे । उनको यो पछिल्लो अभिब्यक्ति ले मेरो मन झन हल्लीयो ।
केबल १८ बर्षको कलिलो उमेरले यो बोझ कसरी बोकोस् उ ? उसले गर्दै नगरेको गल्तिको सजाय बोक्न बाध्य हुनुपर्ने यो कस्तो संस्कार हो हाम्रो ? यसरी छोरीको भाग्य फैसला गर्ने अधिकार कसले दियो आमाबाबुलाई ? त्यो अबोध शिशुलाई काखी च्यापेर अब कुन यात्रामा अगाडी बढोस उ ? उ जस्ता कैयन् कलिला नानीहरु बिना गल्तिको आजिबन कैदमा कति बन्दि भैरहेका होलान यो देशमा ? के छोरी भएर जन्मनुको अर्को पर्याय अरु कसैको गल्तिको अग्नीकुण्डमा आफ्नो जीबन बिना शर्त जलाउनु हो ? एक पछि अर्को प्रश्नले खलबलिए म ।
Tags : गल्ति संस्कार